North Carolina izao dia manolotra fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka amin'ny Apple Maps | Avy amin'ny mac aho
North Carolina dia efa nanolotra fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps
Ny iray amin'ireo lahasa izay mbola andrasan'ny mpampiasa maro ho misy ao an-tanànany dia ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka, fampahalalana ahafahantsika mahafantatra ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina, tram-by, bisy, zotra metro hifindra manodidina ny tanàna nefa tsy mila mampiasa fitateram-bahoaka na tsy miankina.
Ny fampiharana an'io vaovao io mihisatra lavitra noho ny antenainao, izay milaza fa tsy maika ny Apple ary Apple faharoa no faharoa amin'ny orinasa. Soa ihany, na dia eo amin'ny hafainganam-pandeha miadana kokoa noho izay antenainao aza, dia mbola miasa eo io Apple. North Carolina no fanjakana vaovao izay efa manolotra an'ity karazana fampahalalana ity.
Fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka azo alaina amin'ny alàlan'ny Apple Maps manolotra anay vaovao momba ny zotram-by LYNX, bus CATS any Charlotte, bus GTA any Greensboro ary Go Transit any amin'ny faritra Raleigh-Durham-Chapel. Raha te hahita ny karazana fampahalalana ilainao ianao hifindra amin'ny tanàna iray mankany amin'ny tanàna hafa amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka dia mila mifidy toerana fiaviany sy toeran-kafa iray ianao ho an'ilay fangatahana hanolotra anao ny safidy rehetra azonao atao.
Ny hetsika farany nataon'i Apple momba ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka hita ao amin'ny Apple Maps hitanay tamin'ny aprily, raha nanampy tanàna telo any Tennessee ny orinasa monina ao Cupertino. Hatramin'ny nanombohana ny fisian'io asa io tao amin'ny Apple Maps, niaraka tamin'ny fahatongavan'ny iOS 9, ny orinasa dia nanitatra tsikelikely an'io karazana fampahalalana io, indrindra tamin'ny volana voalohan'ny taona, fa rehefa mandeha io dia mihena ny hafainganan'ireo fanavaozana.
Ny zava-dehibe dia hoe, na ho ela na ho haingana, isika dia afaka mankafy an'ity karazana fampahalalana ity amin'ny fomba natoraly nefa tsy mila mampiasa Google Maps, na dia toa mitohy mandritra ny taona maro aza ny fiankinan-doha amin'ny Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » North Carolina dia efa nanolotra fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka ao amin'ny Apple Maps
Apple Watch dia afaka manara-maso ny aretin'i Parkinson noho ny Apple API vaovao
Misy fiasa vaovao tonga amin'ny AirPods, Live Listen